၂၀၁၈ မှာ Sony Xperia ဖုန်းတွေရဲ့ပုံစံက??? – DigitalTimes.com.mm
636 Shares 167 Views
၂၀၁၈ မှာ Sony Xperia ဖုန်းတွေရဲ့ပုံစံက???
ထွက်ရှိလာမယ့် Xperia ဖုန်း၂လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်ပြည့် ဘေးဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံတွေကတော့ ပေါက်ကြားလာပါပြီ။ ဒီပုံတွေကတော့ GizChina.com ကနေ ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ။်
အခုဖုန်း၂လုံးက လက်ရှိ Xperia ဖုန်းတွေနဲ့လည်း ဒီဇိုင်းသိပ်မကွာနေသလို ဖုန်း၂လုံချင်းချင်းလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ တစ်လုံးမှာတော့ လက်ရှိ Xperia ဒီဇိုင်းလိုပဲ ရှေ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ အပေါ်နဲ့အောက်မှာ စပီကာပေါက်တွေပါပါတယ။် ကျောဘက်မှာတော့ တောက်ပြောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ matte အသားနဲ့ ၂မျိုးစပ်ထားလို့ တော်တော်လေးဆန်းနေသလိုပါပဲ။ matte ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းက ဖုန်းရဲ့ အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းမှာတင် စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံစံမျိုးလေးထည့်ထားပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်မှာမှ ပြောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အလယ်လောက်မှာ fingerprint sensor မြှုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာအထားအသိုနေရာကြီးကတော့ တစ်မျိုးကြီး နည်းနည်းထူးဆန်းနေသလိုပါပဲ။
နောက်တစ်လုံကတော့ ထောင့်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ စပီကာနေရာတွေကတော့ ခုနကတစ်လုံးနဲ့တူတူပါပဲ။ သူကတော့ ကျောဘက်သတ္တုကိုယ်ထည်ပဲဖြစ်ပြီး အလယ်မှာ fingerprint sensor ထားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ထိပ်မှာတော့ dual-camera တပ်ဆင်ထားပြီး ဘေးမှာ flash ထားထားပါတယ်။ ဖုန်း၂လုံးလုံးကတော့ 5.7 inch, 18:9 4K display တွေပဲဖြစ်ပြီး သူတို့တွေလည်းပဲ Snapdragon 845 ကိုသုံးမယ့်ပထမဆုံးဖုန်းတွဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ RAM 6GB နဲ့ Android 8.0 ကို run ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို အကြမ်းဖျင်းကျနေသေးတဲ့အတွက် သေသေချာချာသိရဖို့အတွက်ကတော့ CES ဒါမှမဟုတ် MWC ပွဲတွေမှာသိလာရနိုင်ချေရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရောင်းကုန်သွားတဲ့ Honor 7X
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ Apple Store တွင် Download ပြုလုပ်မှု အများဆုံး App နဲ့ Game များ